क्रकपट बीफ स्टू - व्यंजनहरु
ओभनमा कसरी टर्की बेकन पकाउने
कुखुरा पनीर र ह्याम भरिएको
कागतीमा कती कागती जुस
के कुखुरा र पकौडी संग जान्छ
मशरूम सूप साइड डिशको क्रीमको साथ चामल
क्रकपट बीफ स्टू
क्रकपट बीफ स्टू मेरो सबै समय मनपर्ने धीमे कुकर भोजन हो। यो भरिन्छ र गोमांस, गाजर, आलु र मटर (वा हरियो बीन्स) को कोमल भाग संग स्वादिष्ट छ। जब यो सन्तुष्ट भोजनको कुरा आउँदछ, ढिलो कुकर बीफ स्ट्यू अन्तिम हो!
ग्रिल मा बच्चा रातो आलु
खाना पूर्ण गर्न, तपाईले वास्तवमै गर्नुपर्ने भनेको एक पक्षमा थप्नु हो सजिलो छाछ बिस्कुट वा मकै रोटी मफिनहरू मक्खनको साथ स्लेथेर्ड। वा, यसलाई ग्रेभीमा डुबाउनको लागि पर्याप्त घरेलु रोटीको साथ सेवा गर्नुहोस्। सबैजना स्वर्गमा हुनेछन्!
स्लो कुकर स्टूका लागि सामग्रीहरू
यस गोमांस स्टू क्रकपोट रेसिपीका लागि सामग्रीहरू गोमांस चक वा स्ट्यू बीफ, जरा सब्जीहरू जस्तै आलु, गाजर र ताजा र मटर वा सिमी हुन्।
मासु स्टू बनाउनको लागि उत्तम मासु चक स्टेक हो! तपाईंले यसलाई क्युबमा आफैं काट्नु पर्छ। चक एउटा कडा, तर पूर्ण-स्वादिष्ट मासु हो जुन काँधहरू र जनावरको अगाडिको छेउबाट आउँदछ। यो क्रक पट बीफ स्टू वा भाँडो भुनी (पोर्क काँधमा समान बनावट जो बनाउन प्रयोग गरिन्छ क्रक पट पुल पोर्क )। यसले यसको धनी, गोमांस स्वाद कायम राख्छ र क्रोक भाँडोको तल्लो र ढिलो तापमा रसीला र काँटा-कोमल हुन्छ।
स्वादिष्ट स्लो कुकर बीफ स्टू: के एक स्टू वास्तव मा एक स्टू बनाउँछ केक जडिबुटी, गाढा गाईको ब्रोथ र मसाला हो। डिशलाई अझ जटिलता दिनको लागि, रातो रक्सीको साथ क्रोकपट बीफ स्टू बनाउने विचार गर्नुहोस्। एक कप हार्दिक ड्राई वाइनको ठाउँमा बदल्नुहोस्, जस्तै क्याबरनेट सौभिनन वा मर्लोट एक कप कपको मासु ब्रोथको लागि र यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् प्यानलाई डिग्लैज गर्न जुन तपाईंले मासु खैंरो पार्न प्रयोग गर्नुभयो। तपाईं केहि बटन मशरूममा थप्न सक्नुहुन्छ।
कसरी क्रक पटमा गोमांस स्टू बनाउने
हामी एक बनाउन को लागी जबकि क्लासिक स्टोभ शीर्ष गोमांस स्टू , यो सजिलो ढिलो कुकर रेसिपी खाना पकाउन सकिन्छ तर तपाईं आफ्नो दिनको बारेमा जान सक्नुहुन्छ! क्रक पट गोमांस स्टू मात्र केहि सामान्य चरणहरूमा सँगै आउँदछ र गोमांस धेरै कोमल हुन्छ।
पिठोमा लसुनको पाउडरको मिश्रणमा गोमांस टस गर्नुहोस्, र ब्याचमा जैतूनको तेलमा खैरो। प्यान भीड नगर्नुहोस्। (तपाईं यो चरण छोड्न सक्नुहुन्छ तर ब्राउनिंगले स्ट्युमा ठूलो स्वाद थप गर्दछ)।
उही प्यानमा प्याजलाई साटो (श्रोथ वा रातो दाखमद्यको प्रयोग गर्नुहोस् डग्लाज गर्न मद्दत गर्न र तपाईंको क्रक भाँडोमा कुनै खैरो बिट्स थप्न)।
ढिलो कुकरमा सबै थप्नुहोस् (मaप्रयोग गर्दछु 6qt crock भाँडो ) र गोमांस कोमल नभएसम्म पकाउनुहोस्। सेवा गर्नु अघि मटरमा हलचल गर्नुहोस्।
क्रोक पटमा बीफ स्टू कती पकाउने: क्रोक पट गोमांस स्टू एक सेट-यो-र-बिर्सि यो प्रकारको खाना हो। यसलाई -5-। घण्टाको लागि उच्चमा पकाउनुहोस्, वा मासु कोमल नभएसम्म low-for सम्म कममा। तपाइँ यसलाई थप घण्टा तातोमा राख्न सक्नुहुनेछ वा यदि आवश्यक भएमा।
क्रोक पटमा गाईको मासु स्टूलाई पातलो पार्नु: म एउटा कन्स्टार्च स्लरी (बराबर भागहरू कर्नस्टार्च र पानी) प्रयोग गर्दछु र अन्तमा यसलाईमा थप्दछु। कुनै स्टार्च स्वादबाट छुटकारा पाउनको लागि स्लरीलाई थप 10 मिनेट पकाउन यसलाई अनुमति दिनुहोस्।
हामी सही भोजनको लागि केहि क्रुष्ट रोटी वा होममेड डिनर रोलहरूको साथ गोमांस स्टूको सेवा दिन्छौं!
के मास्कोमा खच्चरमा टकसाल छ?
बाँया क्रोकपट बीफ स्टू
बाँकी रहेका फ्रिजमा करीव 3-4-। दिनहरू राख्छन्।
के तपाईं गोमांस स्टू स्थिर गर्न सक्नुहुन्छ: तपाईं क्रोकपट बीफ स्टूलाई राम्रोसँग फ्रिज भएको थाहा पाउँदा खुशी हुनुहुन्छ, त्यसैले ती द्रुत-ठीक भोजन रातहरूको लागि पर्याप्त बनाउनुहोस्। प्लास्टिक कन्टेनरहरूमा विस्तारको लागि लगभग एक इन्च हेडस्पेस छोड्नुहोस्, र तपाईंको स्ट्यु फ्रिजरमा चार महिनासम्म राख्नेछ।
चिकन स्टू - मेरो छोरी मनपर्ने छ
तत्काल भाँडा बीफ स्टू - कस्तो सजिलो
बीफ स्ट्यू रेसिपी - क्लासिक
भेडा स्ट्यु (आइरिश स्ट्यू) - हार्दिक!
गोमांस जौ सूप - स्वस्थ र स्वादिष्ट
क्रोक पट बीफ स्टू
तयारी समयबीस मिनेट कुक समय। घण्टा कुल समय। घण्टा बीस मिनेट सर्भिंगहरू6 सर्विंग्स लेखकहोली निल्सन क्रकपट बीफ स्टू मेरो सबै समयको मनपर्ने एक-भाँडाको खाना हो। यो भरिँदैछ, स्वादिष्ट हुन्छ, परिवारले सँधै मनपर्दछ, र यो अग्रिम तयारी गर्न अविश्वसनीय सजिलो छ। प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢दुई पाउन्ड गाईको मासु वा स्टिफ गोमांस
▢3 चम्मच पीठो
▢3 चम्मच जैतुनको तेल
▢१ कप तरकारीको जुस जस्तै V8
▢। कप गाईको मासु
▢½ चम्मच थाइम वा २ स्प्रिगहरू ताजा छन्
▢१ चम्मच सुक्खा रोमेरी वा १ स्प्रिग ताजा
▢3 कप आलु खुलेको र क्युब
▢दुई कप गाजर १ ईन्च टुक्राहरूमा काट्नुहोस्
▢१ कप अजवाइन डाँठ १ ईन्च टुक्राहरूमा काट्नुहोस्
पीठो, लसुन पाउडर र नुन र कालो मिठाइको स्वादको लागि मिलाउनुहोस्। पीठोको मिश्रणमा गोमांस टस गर्नुहोस्।
जैतुनको तेल सानो झोलामा गोमांस र प्याज खैरो। प्यानमा केही ब्रोथ जोड्नुहोस् र कुनै पनि खैरो बिट्स स्क्र्याप गर्नुहोस्।
मटर र कोर्नस्टार्च बाहेक सबै सामग्रीहरू Q क्यूटी सुस्त कुकरमा थप्नुहोस्।
उच्च -5--5 घण्टामा वा कम--hours घण्टामा वा गोमांस कोमल नभएसम्म कुक गर्नुहोस्।
कर्नस्टार्चलाई २ चम्मच पानीमा मिलाउनुहोस्। स्टुमा अलि अलि बढाउनुहोस् एक पटक गाढा हुनको लागि (तपाईंलाई सबै मिश्रणको आवश्यक नहुन सक्छ)। मटर थप्नुहोस्।
कभर र १० मिनेट पकाउनुहोस्। नुन र मरिच संग मौसम।
क्यालोरिज:8080०,कार्बोहाइड्रेट:२g,प्रोटिन:36g,मोटो:24g,पागलिएको बोसो:।g,कोलेस्ट्रॉल:१०4मिलीग्राम,सोडियम:3०3मिलीग्राम,पोटासियम:१22२२मिलीग्राम,फाइबर:।g,चिनी:।g,भिटामिन ए:45 7545IU,भिटामिन सी:.4१.।मिलीग्राम,क्यालसियम:।मिलीग्राम,फलाम:.6.मिलीग्राम
कीवर्डcrockpot गोमांस स्टू कोर्सबीफ, मुख्य कोर्स, स्लो कुकर पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सोशल मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।